JINGYE Ọrụ Deep Fryer, mejupụtara ite e ghere eghe, Ogwe SS, ọkpọkọ ọkụ, igbe nchịkwa eletrik, nkata e ghere eghe, ọkụ gas, valve valve, iyo sistemụ;
Na Ọrụ Deep Fryer nwere njirimara nke ịrụ ọrụ dị mfe, ịrị elu okpomọkụ ọsọ ọsọ, njikwa ọkụ dị mma, arụmọrụ dị elu, ike ọkụ dị ala, ndụ ogologo ndụ, usoro kọmpat, ndozi ndozi na ihe ndị ọzọ.
Akụkụ nke ngwa: kebab anụ, azụ, ọkụkọ dum, ụkwụ ọkụkọ, tofu, mpekere oporo, iberibe anụ, fries French, ofe nduku, ahụekere, agwa buru ibu, inine, wdg.
1.Uda: 100L, 200L, 200L, 300L, 400L, 500L, 600L;
4. atingdị ọkụ: mmiri mmiri (LPG), eletriki;
6.Basket nwere ike fliped, ntupu oghere ga-enyocha ọtụtụ mmanụ;
1.Automatic okpomọkụ njikwa, setịpụrụ okpomọkụ achọrọ, ọnọdụ okpomọkụ njikwa ga-akpaghị aka ịgbanwe dị ka n'ezie mmanụ okpomọkụ, na-enweghị ntuziaka.Nke a chọrọ maka ndị ọrụ adịghị elu ma gbasaa oge mmanụ, chekwaa ọtụtụ ego.
2.Automatic nkewa nke fọduru mmanụ, akpaka filtration: ọ dịghị mkpa ka hichaa mmanụ na pan, kpọmkwem site na ala nke ighe, ọ dịghị mkpa ịhapụ mmanụ niile. kwesịrị ịsacha ọtụtụ oge n'ụbọchị, nwere ike ighe ụdị nri eghere eghe, nwekwara ike sie ụdị nri esiri esi.
3.Electric discharging.After frying, button control, dum igbe nri ga-akpaghị aka out.There bụ hopper n'okpuru, na nri daba n'ime set akpa.
Nchekwa 4.Energy, fryer kpo oku site na etiti mmanụ, nke mere na enweghi ebe ikpofu oku, ha nile na-eme ka ikpo oku nke mmanu di oku. icheku oku
Nke gara aga: Tankgwakọta tank
Osote: Colloid Mill
Sanitary Centrifugal mgbapụta